लगनगाँठो कस्दै हुनुहुन्छ ? विवाहअघि नै दुवैले वित्तीय योजनाबारे खुलेर कुरा गर्नुहोस् Bizshala -
लगनगाँठो कस्दै हुनुहुन्छ ? विवाहअघि नै दुवैले वित्तीय योजनाबारे खुलेर कुरा गर्नुहोस्
काठमाण्डौ । पैसा एउटा अन्यन्त संवेदनशील मुद्दा बन्न सक्छ । खासगरी ती दुईजनाबीच जो बाँकी जिन्दगी एकसाथ बिताउन चाहन्छन् । पैसा यस्तो विषय पनि हो जसका बारेमा खुलेर कुराकानी गर्न आवश्यक हुन्छ । किनकि जीवनसाथीसँग पैसाका बारेमा खुलेर कुराकानी गर्दा सम्बन्ध स्वस्थ र सन्तुलित बनाएर राख्न निकै मद्दत मिल्छ ।
कसरी गर्ने सुरुआत ?
यो कुरा साँचो हो कि मानिस आफ्नो वित्तीय विवरण कसैलाई बताउन अहसज महसुस गर्छन् । खासगरी तब जब त्यसमा उनीहरुका आम्दानी, बचत, खर्चजस्ता महत्वपूर्ण कुरा समेटिएको हुन्छ । तर यदि लगनगाँठो कस्दै हुनुहुन्छ, दुवैजनाका यस्ता वित्तीय विवरण जान्न जरुरी हुन्छ । यसले दुवैको लक्ष्य एउटै छ कि छैन भनेर पनि पत्ता लाग्छ ।
त्यसैले खुलेर कुराकानी गर्ने वातावरण बनाउनुहोस् । जहाँ दुवैलाई आफ्नो वित्तीय विवरण र योजना सुनाउन सहज होस् । त्यसका लागि पहिले यताउतीका कुरा गर्नुहोस् । आफ्नो जीवनसाथीको मनपर्ने चिज, बीमा गरेको छ छैन, लगानी कता–कता छ आदिबारे विस्तार कुरा अगाडि बढाउँदै लैजानुहोस् ।
विवाहअघिको महत्वपूर्ण वित्तीय कुराकानी
तपाइँ विवाहपछि आफ्नो जीवनसाथीसँग बाँकी पूरै जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ । त्यसैले भविष्यमा आउनसक्ने बाधा अवरोध वा समस्याबाट बच्न छिटोभन्दा छिटो दुवैले आआफ्नो वित्तीय जिम्मेवारी तय गर्न जरुरी हुन्छ ।
तल केही महत्वपूर्ण बुँदाहरु दिइएको जुन विवाहअघि जीवनसाथीसँग कुरा गर्दा उत्तम हुनेछ –
खर्च र बचतका बारेमा आफ्नो हुनेवाला जीवनसाथीको विचार जान्नु अति आवश्यक हुन्छ । कुराकानी गर्दा यो विषयमा विस्तारै प्रवेश गर्नुहोस् । जीवनसाथीको कुरा सुनेपछि उनलाई गलत वा सही साबित गर्ने कोसिस नगर्नुहोस् । यो विषयमा आआफ्नो धारणा र अनुभव सुनाउनुहोस् । यसले दुवैजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न मद्दत प्राप्त हुनेछ ।
खर्च गर्ने बानी
खर्च यस्तो बानी हो जसको बारेमा विवाह गरिसकेकाहरु पनि खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् । जोशमा आएर गरिएको सपिङ, साथीभाइसँग रेस्टुराँ जाँदाको खर्च आदि विषयमा खुलेर कुरा गर्न सायद गाह्रो पर्ला । त्यसैले विवाहअघि जीवनसाथीलाई यसबारेमा खुलेर कुरा गर्दा भविष्यमा सहज हुन सक्छ । अझ भनौ यस्ता बानीमा नियन्त्रण गर्न उपाय पनि सिर्जना हुन सक्छ । यसले भविष्यमा वित्तीय अवस्था मजबुत बनाउन योजना पनि हुन सक्छ ।
विवाहअघि नै दुवैजनाले आफ्नो आम्दानी र खर्चका बारेमा चर्चा गर्न जरुरी हुन्छ । कसले कति कमाउन खासै फरक पर्दैन । जबसम्म दुवैले आपसमा आफ्नो आम्दानी र खर्चका बारेमा खुलेर कुरा गर्दैनन् तबसम्म दुवैजनाबीचको विश्वासको वातावरण पनि सिर्जना हुँदैन । त्यसैले आम्दानी खर्चबारे प्रस्ट रुपमा आपसमा कुरा राख्नुहोस्, यसले विवाहबीच अवस्था सुखसयलमा बित्नेछ ।
यदि तपाइँ आफ्नो जीवनसाथीसँग विवाहपछि विदेशमा घुम्न जाने, सम्पत्ति जोड्ने, बच्चा जन्माउने आदि इच्छा राख्नुभएको छ भने त्यसबारे विवाहअघि नै खुलेर कुरा राख्नुहोस् । एक–अर्काको इच्छाका बारेमा विवाहअघि नै जानकारी भएमा पछि त्यस्ता इच्छा पूर्ति गर्न सहज हुनेछ । त्यस्तै यी इच्छा पूरा गर्न कति खर्च लाग्छ र त्यसका लागि बेलैमा कति बचत वा लगानी गर्दै जानुपर्छ भन्ने विषयमा समझदारी बन्न सक्छ ।
यदि दुवैजना जागिरे हुनुहुन्छ भने तपाइँले यो कुरा निक्र्यौल गर्नुपर्छ कि घर खर्च कसरी चलाउने ? जस्तै भाडामा हुनुहुन्छ भाडा खर्च, बिजुली, बत्ती, पानी, टेलिफोनको बिल, रासन खर्च आदिका विषयमा विवाहअघि नै यो विषय पनि उठाउन जरुरी हुन्छ । यदि दुवै यी विषयमा सहमत हुँदैन समानुपातिक तरिकाले खर्च व्यहोर्ने निर्णय हुन्छ भने विवाहपछिको दैनिकी आरामदायी हुन्छ ।
विवाहअघि नै माथि उल्लेखित विषयमा आपसमा चर्चा गर्दा थाहा हुनेछ कि दुवैको एक–अर्काका बारेमा के विचार राख्छन् । दुवैलाई थाहा हुनेछ कि एक–अर्काको विचारबीच अन्तर छ कि छैन । यसले दुवैलाई एक–अर्काको कुरा जान्ने र मतभिन्नता देखिएका विषयमा समझदारी जुटाउने उपाय निकाल्ने मौका मिल्नेछ ।
अन्तमा विवाहअघि नै गरिएको वित्तीय व्यवस्थापनको कुरालाई विवाहपछिको जीवन सुखसयलमा बित्नेमा दुईमत छैन । किनकि हामीले देखेका छौँ कि भविष्यका बारेमा कुराकानी नै नगरी विवाह बन्धनमा बाँधिएका कतिपय जोडी जीवन भद्रगोल भएका छन् । कतिपय त आर्थिक सोच–विचार नमिलेकै कारण डिभोर्ससम्म लिएका घटना प्रशस्त छन् ।
त्यसैले विवाहपछिको जीवन सुखसयल र आनन्दपूर्वक बिताउनु छ भने विवाअघि नै वित्तीय व्यवस्थापन तथा योजनाबारे आपसमा खुलेर कुरा गर्नुहोस् । अनिमात्र विवाह बन्धनमा बाँधिनुहोस् । –एजेन्सी